ဒီလိုကြီးတော့မမူး ကြ ပါ နဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဒီလိုကြီးတော့မမူး ကြ ပါ နဲ့
ဒီလိုကြီးတော့မမူး ကြ ပါ နဲ့
Posted by bigchef on Dec 30, 2011 in Copy/Paste | 21 comments
2011 ကတော့ကြေကွဲ စရာအ ဖြစ်ဆိုး ြကြီး နဲ. နှုတ်ဆက်သွား ပြီ.ဝမ်းနည်း စရာပါ. လာ မဲ့နှစ် ကူးကို ဘယ် လိုကြို ရ မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။
စိတ် ညစ်လို ့ဘဲ ဖြစ်ဖြစ ်ပျော်လို့ ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် party မှာ သိပ် မသာက်ကြ ပါ နဲ့။စေတနာ နဲ.ပါ။ယောင်္ကျာလေး တွေ က မူး ပြီး လမ်း ဘေး မှာ မှောက်နေတာ ပြ သ နာမဟုတ် ပေ မဲ့ မိန်း က လေး အ တွက် စိတ် ပူ လို့ပါ။ မိန်း ကလေးတွေ မူး ရင် ယောင်္ကျား လေး တွေ ထက် ဆိုး တတ် ပါ တယ် ။ အူ ရိုင်း တွေ မို့ ပါ။
သောက် ချင် ရင် လဲ ဝိုင် တို့ရှန်ပိန် တို့ နည်း နည်း ပါး ပါး ပေါ့။ပြော မယ် သာ ပြေ ရ သာ ရွာ ထဲ က လူ တွေ က အားလုံးက ဆရာ ကြီး တွေ ပါ.
ရွာ သူတွေ အား လုံး လဲ သောက် တတ်မယ် မထင် ပါ ဘူး။ အောက် က ပုံ တွေ က ဆိုက် တ ခု က ဆွဲ လာ တာ ပါ။ မမ လေး တို့ များ မူး ရင်ကြောက်စ ရာ ကြီး။
ဂီဂီ အိမ်မှာ ရိုက်ထားတာလားဟေ ..
သူပြောတဲ့ ဥဩ ခွတ်စမတ် ဖြစ်မယ်
ရန်ကုန်မှာလဲဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပါပြီ။ မိန်းကလေးတွေနိုက်ကလပ်မှာ။ Same Same ပဲ။
သုရာမေရယကံ မစောင့်ထိမ်းကြလို့လက်ငင်းပဲ ကံကြီးထိုက်တာလို ့ခေါ်သကွဲ ့
မနက်ပိုင်းကြီးဂို သများက မူးစရာလားလို ့
သများက အမူးသမား မဟုတ်ဘူး
သများက ဘီအီးဘီယာယမကာ လုလင် လင်လု ဖင်တု အင်ထု ရှကီထု ဟင်ဂလု
အနံ ့တစ်ထောင်းထောင်းနဲ ့မိုလို့မန်နေကြာမလာခင် ခိုးအိပ်ဦးမယ်
ခူး ခလော ဝရော ကျွိကျွိ ဂွိဂွိ
ပျော်တာတော့ပျော်တာပေါ့နော် … လွန်လွန်ကဲကဲဆိုလျှင်တော့ မကောင်းပါဘူး … ။
အပျော်တွေလွန်ပြီး အပျက်တွေ မဖြစ်စေဖို့ .. ကိုယ့် limit လေးကိုယ်ထိန်းသင့်ပါတယ် … ။
မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထိန်းရခက်တဲ့ စပ်ကူးမတ်ကူးပွဲပါပဲ .. ယောကျာ်းလေးဆိုလည်း … အရက်မူးလို့ ရန်ဖြစ် ရိုက်ကွဲတာတွေဖြစ်နိုင်သလို .. မိန်းကလေးဆိုလည်း .. စိတ်ငြိမ်ရာအရပ်တွေ အလွယ်တကူရောက်သွားနိုင်တယ် .. သတိနဲ့ယှဉ်လို့ မိမိကိုယ်မိမိထိန်းတာက အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ရာပါပဲ .. ။
ကျွန်မက မိဘနေရာမှာဆို .. အိမ်ကကလေးတွေကို အိမ်မှာပဲ ပါတီပွဲလုပ်ပေးလိုက်မယ် .. သူတို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ချင်သလောက်ပျော်ပေါ့ … ကိုယ့်မျက်စိရှေ့တင်ဆိုတော့ စိတ်ချရတယ် … ။ ( မိဘများကို ကြပ်ပေးခြင်း )
@နီကီတာ ရေ.. ကဗျာ ဆန်ဆန်ပြောရရင် အဲ့ဟာတွေက “ရင်တွင်းဖြစ်” တွေပါ
အင်း အကြည်တော်စာပေဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာပြောတာကြားဖူးတာတော့ မူးရင်(သူရာမေရိယကံကိုချိုးဖောက်ထားရင်) တခြားကံတွေချိုးဖောက်ဖို့နေနေသာသာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တောင် မူးပီးခွေနေတာ ဆိုဒါ ဟုတ်လောက်တယ်…
သူရို ့လေးတွေ နဲ ့
တူဒို ့လေးဒွေထဲဂ တချို ့ဟာ ဂျော်ရကီးတွေဆိုရင်ကောကွယ်…???
အဲ့ ဒါတွေမြင်တော့ အင်း… ဒို့ဆီမှာ သင်္ကြန်ကျတဲ့ အခါ
အင်းးးး. အိမ်သာထဲမှာတောင် အိပ်ပျော်နေပါလား။!!!!!!!
ပျော်ပါး စားသောက်နိုင်ကြပါစေလို ့ဆုတောင်းပါတယ်။
ဒီနေ့မှာ ဒီလိုမူးကြမယ့်သူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရှိမလဲ မသိဘူး
လူတွေကလည်း ဒါကိုမှ ခေတ်မှီတယ်လုပ်နေကြတာလေ… အတော်ပဲ မိန်းကလေးတွေအတွက် မကောင်းပါဘူး။ ခုက သင်္ကြန်၊ ခရစ်စမတ် နောက် နယူးရီးယား ဆိုပြီး သောက်စားမူးယစ်နေကြတာ အတော်ကို ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နိုင်လှပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကလပ်တွေ၊ ဘီယာဆိုင်တွေ ကေတီဗီတွေ အတော်ပေါလာတာလည်း ၂၀၁၂ အတွက် ရင်လေးစရာတစ်ခုပါပဲလေ…